Mamarara… • AoRaha
Fa dia loza inona loatra re olona ity mahazo ny sasany amin’ireo mpitandro ny filaminana a? Tifitra, tsy an-kifidy na samy mpitandro ny filaminana na olon-tsotra, no re etsy sy eroa ary mila hanenika an’i Madagasikara mihitsy. Sao dia mila averina kely ao an-dohan’izy ireny fa « tandroka aron’ny vozona » anie ry zareo fa tsy « tandroka hanoto izay sendra azy ». Soa fa ny ampahany amin’izy ireo ihany no manao izany ary tokony hofaizina faran’izay henjana mba tsy hianaran’ireo zandry aty aoriana, ka manaratsy ny sary ao an-tsaina.
Vao tsy ela no nisy fitifirana olona tany Ilakaka, izay nampisavoritaka ny iray tanàna. Tsy tapitapitr’izay, indreo fa mifampitifitra ny samy zandary mpiana-draharaha teny Ambohimangakely. Izao indray, miaramila kaporaly no voalaza fa nitifitra olon-tsotra tany Mahabo, Amboasary-Atsimo. Mino aho fa tsy ny fianarana mitifitra ihany no atao any amin’ny sekoly na andiany misy azy ireo fa ianarana ihany koa ny fotoana hampiasana azy.
Raha jerena ny any amin’ny ady anaty akata, izay fahita amin’ny horonantsarimihetsika, dia tsy mahazo mitifitra mihitsy ry zareo ireny raha tsy misy ny baiko amin’ny feo avo ataon’ny lehibe mpitarika azy hoe « tifiro ». Mifanohitra amin’izany anefa no miseho eto amintsika. Mitifitra aloha vao mahafantatra ny lehibe. Mino sy manantena anefa aho fa ho lavitra an’ireny lehibe ireny ny « fifampiarovana » izay mety hiteraka laza ratsy ho an’ny mpitandro ny filaminana. Tokony tsy handaitra any amin’ireny mpitandro ny filaminana ireny mihitsy ilay ohabolana hoe « saonjo iray lohasaha ka tsy ilaozan’izay mamarara ».